Best Dental Clinic | Clean & Cheap
Dental Knowledge Videos
About Clean & Cheap
Warmly Welcome to “C & C” Dental Clinic . We Care All Our Patients like Our Parents, Brothers, Sisters, Relatives.
Our Precious Treatments
⭐️Porcelain Veneers - 20% off ⭐️Porcelain fuse to Zirconia - 20% off
New Installment Plan for Ortho Treatment
သွားညှိကုသစရိတ် အရစ်ကျပေးချေခွင့် အစီအစဉ်အသစ်
Full/Full Skeletal Denture
✅မနေ့က ဆေးခန်းမှာပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးအစား ရှယ်သတ္တုအံကပ်ပါ
✅အပေါ် / အောက် သွားအပြည့် ပြန်လုပ်ပေးထားတဲ့ Case ပါ
✅သတ္တုအောက်ခံကို Singapore နိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ပြုလုပ်ပေးပြီး သွားတွေကို Japan Quality သွားတွေ ထည့်ပေးထားပါတယ်
✅အံကပ်အမျိုးအစားအားလုံးကို 10% Discount ပေးနေပါတယ်
!! အသက်သာဆုံး အထူးအစီအစဉ် !!
(ကုန်ကျငွေရဲ့ 10 % စီ +10 ကြိမ် 10 လအရစ်ကျခွဲသွင်းခွင့်) ( December လကုန်အထိ အချိန်တိုးမြင့်လိုက်ပါပြီ )
PFZ Crowns & Bridge
သွားပိုးစားတာ အရမ်းများသွားပြီး သွားအကြောထိသွားလို့ သွားအကြောထုတ် ကုသပေး၍ အကောင်းဆုံး ကြွေအမျိုးအစားနဲ့ သွားအစွပ်လှလှလေး ပြန်စွပ်ပေးထားတာပါ
‼️ သတ္တုအောက်ခံပြားကို စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ပေးပို့ပြုလုပ်ပြီး သွားများကို ဂျပန်သွားများ တပ်ဆင်ပြုလုပ်ပေးထားတာပါ ‼️
ဒီနေ့သွားခဲ့တာ ဆရာနဲ့တွေ့ရတာ ကံကောင်းတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။ မသွားခင် အတန်တန် တာင်းခဲ့တဲ့ ဆုလေးလည်း ပြည့်သွားတယ်။ ဆရာအင်မတန် စိတ်ရှည်တယ်။ မသိတာမှန်သမျှ အကုန်ရှင်းပြ ပေးတယ်။ Dr. Cham Min Lin အရမ်းသဘောကောင်းပါတယ်။ သွားဝေဒနာရှင်မိတ်ဆွေတွေကို မျှဝေပေးပါ့မယ်။
Aye Aye Lwin
ဆရာကော ဆရာမကော အရမ်းစိတ်ရှည်ပြီး သဘောကောင်းပါတယ်။ သွားနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အရမ်းစိတ်ချရတဲ့ ဆေးခန်းပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Su Yadanar Hlaing
Great services and very friendly dental clinic in town ❤️
*** Warmly Welcome to “C & C” Dental Clinic ***
We Care All Our Patients like Our Parents, Brothers, Sisters, Relatives.
အမွတ္​(၁၉)၊ စမ္​း​ေခ်ာင္​းလမ္​း၊ စမ္​း​ေခ်ာင္​းၿမိဳ႕နယ္​(ဗဟိုလမ္​းအနီး)
50, 4th Street, Lanmadaw Tsp Yangon
+959 782 255022
© 2019 Clean & Cheap Dental Clinic | Developed by Myanmar Digital Marketing & All Rights Reserved.